Ku eeg Laba Bogood, Ku Xakamee Website-yada iyo Talooyin kale oo iPad Safari ah
Sida Loo eego Laba Bogood, Lagu Xakamee Website-yada iyo Talooyin kale oo iPad Safari ah
Ma ogtahay inaad xayeysiin karto dhammaan xayeysiinta, waxyaabaha alaabta iyo waxyaabo kale oo dheeraad ah oo kaa xanaajinaya inaad si nadiif ah u aqriso bogga internetka leh tuubo hal fartaada ah? Ama badbaadi maqaal aad ka heshay iPhone si aad wax uga akhrido oo aad si deg deg ah ugu qaadatid iPadkaaga? Safari wuxuu u ekaan karaa sida sahlan oo sahlan webka loo isticmaalo, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo qarsoon oo qarsoodi ah haddii aad ogtahay meesha aad u eegi lahayd.
01 ee 13
Sidee Loo Sheegaa Laba Taabasho Mar Kale
Apple ayaa kor u qaaday kartida awoodda badan ee iPad-ka, mid ka mid ah sifooyinka ugu cusub ee ay ku darsadeen waa awoodda lagu kala qeybin karo Safari Safari laba jeer, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku hesho laba bog oo internet oo kala duwan shaashadda isla waqtigaas. Xaqiiqdii, dhinac kasta oo ka mid ah browserka ayaa xitaa heli doona tabo u gaar ah, waxaadna ka qaadi kartaa tabsiyada dhinac ka mid ah shaashadda ilaa kan kale.
Qalabkani wuxuu u baahan yahay iPad oo taageera miidhiyaha kala duwan ee shaashadda . Kuwaas waxaa ka mid ah iPad Air 2 ama wixii ka dambeeya, iPad Mini 4 ama ka dib iyo iPad Pro line kiniinnada.
Waxaad furi kartaa muuqaalka taranka Safari adigoo xiraya badhanka badhanka. Tani waa badhanka u muuqda sida afar geesle ah oo dusha sare ah. Marka aad qabsato badhanka, ayaa ka soo baxaya menu kaas oo ku siinaya doorasho aad ku soo geli karto qaybta "Split View".
Inkastoo muuqaalka kala duwan, qalabkani wuxuu ka dhaqaaqayaa xagga sare ee shaashadda ilaa hoose ee shaashadda, halkaas oo aad ka heli doonto aalad aad u aragto aragti kasta. Sidaa darteed waxaad weli wadaagi kartaa boggaga shakhsi ahaaneed, meelaha furan ee loogu talagalay dhinaca bidix ama dhinaca midig ee shabakada, iwm.
Haddii aad ogtahay inaad haysatid farta hoose ee isku xirka liiska oo kuu oggolaan doona inaad bogga internetka ku furto tab cusub, waxaad sameeysaan si aad u furto bogga kale ee aragtida.
02 ka mid ah 13
Sidee loo xaddidaa Websiteka
Tani waa mid aad u wanaagsan waalidiinta. Waxaad runtii xaddidi kartaa galka Safari in ay ka soo baxdo website-yo gaar ah ama xitaa xayiraan boggaga oo dhan marka laga reebo kuwa ku qoran liiskaaga.
Ugu horreyn, waxaad u baahan doontaa inaad ku xakameyso xannibaadyada iPad-ka. Waxaad sameyn kartaa tan adigoo furaya app Settings , doorasho guud oo ka socda menu bidixda iyo xakamaynta xaddidaadda. Xagga sare ee shaashadda waa isku xirka xakamaynta xanibaada waalidka. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad ku soo celiso baaskiilad xaddidaad. Furcaddaan waxaa loo isticmaalaa in lagu badalo xayiraadaha ama u ogolaato website-ka kaas oo horey u naafoobey habka xayiraad.
Ka dib marka aad gashid dukumiintiga, waxaad ku dhejin kartaa oo ku dheji "Shabakadaha". Waxaad haysataa saddex ikhtiyaar: U oggolow dhamaan Websaydhyada, Xaddid mawduuca dadka waaweyn iyo boggaga gaarka ah ee keliya. Xadka Xaddidan Adult Content waa mid weyn sababta oo ah ma aha oo kaliya xayiraadda safari ee ka imanaya loading kasta oo website ah oo loo arko in ay leeyihiin qaangaar dadka waaweyn, laakiin sidoo kale waxaad ku dari kartaa boggaga gaarka ah ee liiska si ay uga dhigaan inay ka dhigaan inay kor u qaadaan ama ku daraan bog internet ah liiska meelaha la ogol yahay culus.
Xadka Xaddidan Adult Content wuxuu u fiican yahay dhalinyarada, laakiin carruurta yaryar, Website-yada Khaaska ah Xulashada inta badan waa kuwa ugu fiican. Markaad Safar Safar gashan adigoo isticmaalaya fursadan, waxaad si fudud u "U ogolaan kartaa" bog kasta oo aad u malaynayso inuu ku fiican yahay cunuggaaga adigoon dib ugu noqonin goobaha. Kaliya ku dhufo Xulashada Dareemaha kadibna ku qor xarafka si aad ugu oggolaato barta internetka in ay dhaafto shaandhada.
Read More Maqaallo ku saabsan Xayiraadda Macmiilka ay ka mid yihiin Apps, Movies iyo Music More »
Taabo si aad u tagto dhinaca sare ee bogga
Muuqaalka musqusha-sare-wuxuu kuugu soo celinayaa bogga intarnetka ka dib markaad bogga ku sawirtid. Muuqaalkani wuxuu ka shaqeeyaa barnaamijyo badan oo kala duwan halkaas oo aad bogga u rogto bogga sida Facebook iyo Twitter.
Habka ay u shaqeyneyso waa adigoo ku dhexjiraya bartamaha shaashadda adigoo eegaya dusha sare ee iPad. Caadi ahaan, wakhtigu wuxuu ku tusayaa korka shaashadda, iyo haddii aad si fudud u taabatid waqtiga, waxaad aadi doontaa bogga sare.
Haddii aad kuxirantahay View in browser Safari, waxaad u baahan doontaa inaad ku xiirto bartamaha sare ee dhinaca dhinaca meesha aad rabto inaad dib ugu noqoto xagga sare. Sidaa darteed ma qorsheyn kartid wakhtiga Split View, laakiin mawduucku wali wuu shaqeeyaa haddii aad taabatid xarunta sare ee dhinaca bidix ama dhinaca midig.
Dib-u-dhaqdhaqaaq iyo Habboon
Safari Safari wuxuu leeyahay badhanka dambe (<) xagga sare ee shaashadda kaas oo kuu ogolaanaya inaad u guurto bogga hore ee bogga. Tani waa weyn markaad raadineyso Google iyo bogga aad ku soo degtay ma aha wax aad rabto. Uma baahnid inaad mar kale raadiso markaad dib ugu noqon karto Google. Waxa kale oo jira badhan soo gudbineysa oo la heli karo markaad dib u soo guurto, oo aad ku laabato bogga asalka ah ee asalka ah.
Laakiin marka aad bogga gasho, badhanka farshaxanada ayaa baaba'aya. Waad ku soo celin kartaa adiga oo kor u fuulaya, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad dib ugu soo guurto waa wejiga. Haddii aad fartaada ku taabato dhinaca bidixda bidix ee shaashadda oo muujinaysa in muraayada ay soo buuxsantay miisaanka oo dabadeedna farahaaga u dhexeysa bartamaha shaashadda adigoon kor u qaadin, waxaad arki doontaa bogga hore ee la soo bandhigay. Waxaad sidoo kale tagi kartaa 'horey' adoo samaynaya kaliya soo-horjeedka: ku xir dhinaca geeska midigta midigta iyo fartaadaada dhexda dhexe.
05 ee 13
Sida Loo Helo Taariikhdaada Cusub ee Taariikhdaada Cusub iyo Taabbooyinka Furan Furka
Ma ogtahay in iPad uu heysto taariikhda webka ee miis kasta oo aad leedahay oo ku furan Safka Safari? Aniga iyo aniga. Ilaa inta aan ku turunturoodo. Waxaad ku heli kartaa taariikhdaada ugu dambeysa adiga oo faraya oo fartaada saaraya farta hoose (<) xagga sare ee shaashadda. Ka dib dhowr ilbidhiqsi, liistada ayaa ka muuqan doonta websay kasta oo aad furan tahay ee tabarka.
Waxaad sidoo kale dib u fureysaa tab haddii aad si khalad ah u xirto. Waxaad samayn kartaa tan adigoo haysta fartaada hoosta badhanka cusub, kaas oo ah badhanka faraha ee leh calaamad (+). Markaad fartaada hoos u dhigto, cuntadu waxay ku soo baxaysaa liiska ugu dambeeya ee aad xiran tahay.
06 ka mid ah 13
Sida Loo Helo oo Isku Xidhnaado Taariikhdaada Guud
Haddii aad rabto wax ka badan taariikhdaada internetka ee dhawaan, waxaad ka heli kartaa iyada oo loo marayo Muujimaha Muujinta . Buug-tilmaameedyada sub-menu-ka ah ayaa marar badan ku wareersan. Waxaa jira saddex tabs oo xagga sare ah: buug-yaraha, liiska akhriska iyo liiska la wadaago. Buuga xuruufaha ayaa sidoo kale leh dhowr qaybood oo ay ku jiraan "Qaybta" "Bookmarks Menu" ee buug-tilmaameedyada. (Waxaan u sheegay inay ahayd jaahwareer, sax?)
Haddii aad ku jirto heerka ugu sarreeya ee buugga "Bookmarks tab", waxaad arki doontaa ikhtiyaar Taariikhda ka hooseysa qeybta "Favorites". Haddii aadan ku jirin heerka ugu sarreeya, waxaad arki doontaa xiriirka "Dhamaan" oo ka hooseeya badhanka "Bookmarks tab" oo kuu geyn doona heerka sare.
Qaybta Taariikhda, waxaad arki kartaa taariikhdaada internetka oo aad ku soo laaban kartaa bog kasta oo shabakad ah adigoo si fudud u soo jiidaya. Waxaad sidoo kale tirtiri kartaa hal shay oo taariikhdaada ah adiga oo fartaada fartaada ka soo jeeda dhinaca bidixda ku xigta si aad u muujiso badhanka tirtirka. Waxaa sidoo kale jira badhanka "Clear" ee hoose ee shaashadda kaasoo tirtiri doonta taariikhdaada internetka oo dhan. More »
07 ka mid ah 13
Sida loo Xaqiijiyo Si Xun ah
Haddii aad ka tirtirto dhawaaqyada taariikhdaada webka sida shaqo badan oo kaliya si loo qariyo bogagga aad soo booqatay markii aad soo iibsaneysid xaaskaaga dhalashada ee xaaskaaga, waxaad kuxadin doontaa booqashada khaas ah. Markaad eegto qaab gaar ah, Safari ma geli karto bogagga aad booqatay. Waxa kale oo aan la wadaagin cookies browser, taas oo macnaheedu yahay in uusan u sheegin website-yada wax ku saabsan.
Waxaad u jeedin kartaa Browsing Gaarka ah adiga oo xirxiraya badhanka tabka, taas oo ah mid leh laba geesood oo kor u sareysa oo midba midka kale ka mid ah, ka dibna ku dheji "Gaari" ee korka shaashadda. Waxaad ogaan doontaa markaad ku jirtid hab gaar ah sababtoo ah liiska ugu sareeya wuxuu yeelan doonaa asal madow.
Xaqiiqo Xiiso leh: Dakhliga Gaarka ah lama geli karo haddii xayiraadaha waalidku loo rogo browserka Safari. More »
08 ee 13
Liiska Akhriska iyo Xiriirinta La wadaago
Miyaad ka yaaban tahay labadii tiir ee kale ee ku jira 'Bookmarks Menu'? Liiska Akhriska waa qaab muuqaal ah oo kuu ogolaanaya inaad kaydiso maqaal aad ka heshay webka liiska akhriska. Liiskan waxaa wadaagaya dhammaan qalabkaaga, markaa haddii aad aragto maqaal aad u weyn oo ku saabsan iPhone ah laakiin aad rabto inaad wax ka akhrido marxaladda weyn ee iPad-kaaga, waxaad ku keydin kartaa liiska Akhriska.
Waxaad u keydsan kartaa maqaal ku qoran liiskaaga Akhriska si isku mid ah oo aad u keydiso bogga: taabtaada iyo haysashada badhanka bookmarks.
Liistada Linked Links waa muuqaal kale oo wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jecel Twitter. Waxay muujin doontaa dhammaan xiriirrada lala wadaagayo jadwalkaaga taariikhda Twitter-ka. Tani waxay ka dhigeysaa hab weyn oo lagu ogaan karo waxa uu ku dhacay xilligan.
09 ka mid ah 13
Sida Loo Wadaago Bogga Shabakadda
Isaga oo ka hadlaya wadaagista, miyaad ogtahay in ay jiraan siyaabo dhowr ah oo aad wadaagi kartid waxaad akhrinaysaan saaxiibadaa? Badhanka ayaa ah badhanka oo leh foorno tilmaamaysa dusha sare. Markaad taabatid, waxaad arki doontaa daaqad ikhtiyaari ah oo aad ku wadaagto bogga internetka iyada oo loo marayo farriin qoraal ah ama boosto si loo daabaco bogga internetka.
Way sahlan tahay in bogga la wadaago fariin qoraal ah, laakiin haddii aad toos u taagan tahay qofka oo ay isticmaalaan iPad ama iPhone, waxaad isticmaali kartaa AirDrop . Qaybta ugu saraysa ee liiska wadaagista waxaa loo maraa AirDrop. Qof kasta oo asxaab ah ee ku jira liiska xiriiriyaha ayaa halkan ka muuqan doona. Si fudud u garaac astaanta astaanta oo waxaa laguugu soo dirayaa si aad u furto bogga internetka ee qalabkooda. More »
10 ka mid ah 13
Sidee loo xayeysiiyaa Xayeysiinta Dhammaan Websaytka
Midkani wuxuu noqonayaa ikhtiyaarka caanka ah sida bogagga shabakada oo ka kooban xayeysiisyo badan oo ay dhab ahaantii hoos u dhigaan geeddi-socodka ah ee bogga lagu ridi karo. Mid ka mid ah wax fiican oo ku saabsan badiba xayeysiinta adreeska waa awood u lahaanshaha "macruuf" bogga, taas oo micnaheedu yahay inaad xayiri karto xayeysiiska laakiin u sheeg qofka xayeysiinta ah inuu u oggolaado xayeysiisyada boggaga aad jeceshahay si loo hubiyo in daabacadu ay hesho dakhliga xayeysiinta ee loo baahan yahay si loo ilaaliyo bogga internetka.
Nasiib daro, xayeysiisyada xayeysiisku maaha habka tooska ah. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad raadiso xayeysiiyaha xayeysiiska ee App Store. Markaad hesho mid aad rabto, waxaad u baahan tahay inaad ku soo celiso goobaha iPadka. Waxaad sameyn kartaa tan adigoo furaya app Settings , adigoo dooranaya safari Safari oo ka socda menu bidixda, waxaad ku xirtaa "Block Blockers" ka dibna baddelka xayeysiiska gaarka ah ee bogga xannibay.
Isku dayay? Akhri tilmaamahayaga si aan u xayirno xayeysiiska iPad-ka . Ama waxaad ka akhrisan kartaa calaamada soo socota si aad u ogaato sida loo xareeyo xayeysiisyada hal bog. More »
11 ka mid ah 13
Akhri maqaal aan lahayn xayeysiiska
Uma baahnid xayeysiiyaha xayeysiiska si aad uga xayeysiiso xayeysiisyada maqaalkiisa. Safari Safari wuxuu leeyahay qaab akhriste kaas oo isku dari doona qoraalka iyo sawirada iyada oo aaney xayaysiinta ku siinin si wanaagsan oo nadiif ah loo akhriyo. Uma baahnid inaad wax sameyso si aad u sameyso. Kaliya kucun barta xarriiqyada cirifka ee ku xiga cinwaanka webka ee bogga raadinta. Taabtani waxay dib u habaynaysaa bogga si aad u aqriso.
12 ka mid ah 13
Ka raadi Webka ama Raadinta Webka
Muuqaalka raadinta sare ee safka Safari dhab ahaantii waxoogaa wax badan ayuu ka badan yahay oo kaliya si aad u raadisaan Google wixii aad ku qorto ama aad gashid bog gaar ah marka aad ku qorto cinwaanka shabakadda. Waxay sidoo kale soo jeedin kartaa bogag iyo muujin kartaa boggaga isbarbar dhigga ah ee aad ku kaydsan tahay ama taariikhda shabakadeena.
Ma dooneysaa inaad raadiso bogga lafteeda? Natiijooyinka raadinta bogguna waxay sidoo kale muujinayaan "boggan", oo ku habboon weedha aad ku qorto mar kasta oo loo isticmaalo bogga aad booqanayso. Xitaa waxaad ka heli doontaa gadaal iyo gadaal u jeedi si aad u dhex mariso nooc kasta oo eray ama weedho ah oo dhan bogga oo dhan.
13 ka mid ah 13
Codso Website-ka Desktop
Way fiicnaan laheyd in la fekero in iPad-yadu muddo dheer ku filan tahay oo ay caan ku tahay in boggaga intarnetka ee badani ay na siiyaan bogag kuwaas oo tixgelinaya hantida hantida weyn ee ku jirta shaashadayada, laakiin qaar ka mid ah boggaga qaar ayaa wali kor u qaadaya moobilka casriga ah ama shabakadda mobile-ka. Xaaladahaan, waxay wacan tahay inay ogaadaan waxaan ka codsan karnaa bogga 'buuxa'.
Waxaad ku dhejin kartaa qaabka moobilka ee shabakadda adigoo ku dhejinaya iyo qabashada badhanka "refresh" ee ku xiga barta raadinta. Tani waa badhanka oo leh foorno ku socota qayb wareegsan. Haddii aad taabatid oo aad qabatid badhanka, waxaa kuu muuqan doona menu kaas oo ku siin doona "Request Desktop Site".
Waxa la sameeyo iPad-ka cusub
OG: Tababarka iPad-ka iyo Sawir-Sawirka
Casharada iPad ee aasaasiga ah si aad u baro iPad
Kumbuyida iPad-ga Qalab la'aan
12 Waxyaabaha Aanad Garanaynin iPadka Waxay Sameyn Karaan
Haddii Ilmahaaga Ilmahaaga ama Preschooler Isticmaal iPad?
Sida Loo Helo iPad
Sida loo abuuro "Sawirrada" Sawirada Sawirada "iPad"
9 Dhibaatooyinka ugu Weyn ee Taariikhda iPhone
Waa maxay VoIP Latency iyo Sidee Loo Heli Karaa?
6 Games Sida Hearthstone: Heroes of Warcraft
Isticmaalka Spotify iyo Juqraafi ah oo ku yaala IPodka Touch
Sidee baan ku helaa kamarad leh xawaare si xawli leh?
Muxuu Sii Joogi Karaa Iyo Sideen Baan Ku Helaa?
Codsiyada VoIP-ga ee inta badan
Sida Loogu Badbado Sawirrada Loo Beddelay iPhoneka
Sidee loo Isticmaalaa Fudud Dabaysha Wareegga
Taliska iyo Qabsashada: Khadka Aargoosiga ah ee Cilmi-baadinta - PS1
Soul Calibur 3 Cheats iyo Unlockables ee Playstation 2
Macalinka Macluumaadka - Fahmitaanka Cusub ee 'Diyaarso' Ikhtiyaarka
Sida Qarsoodi Gaar ah Muuqaalada Facebook ee Nosy dadka
Hitman 2: Kalfadhiga Aasaaska ah ee Assassin ee PS2
Eeg Laba PowerPoint Soo Bandhiga Waqtiga Islaamka
Pioneer 5.1 Tilmaamaha Nidaamka Wada-Hadal Sawirada
Sida loo xafidayo faylashaada TrueCrypt
Sida Loo Doorto Drupal 7 Module si aad u aragto PDFs
Left 4 Khiyaamada Dhiman, Xeerarka & Tilmaamaha PC
10ka jadwalka ugu wanaagsan ee la iibsado sannadka 2018
Waa maxay sida dhabta ah ee loo yaqaan 'Reddit AMA'?
Ma sameeyaan USB-yada loo yaqaan 'Ethernet Adapters' oo ku jira Moodhadhka Weyn ee Broadband?